Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 31)
Iinguqulelo zeTouchwiz kwi-Android 6.0 Marshmallow
Imifanekiso yeTouchWiz iye yavuza kwi-Android 6.0 Marshmallow version apho ufumana ukusebenza okungcono kunye notshintsho olubonakalayo.
Uhlaziyo lweefoto zikaGoogle ukukhulula indawo kwifowuni yakho
Iifoto zikaGoogle zifumana uhlaziyo olutsha olujolise ekukhuliseni indawo yokugcina kwifowuni yakho ye-Android okanye ithebhulethi.
UGoogle + ufumana ukwenziwa ngokutsha okujolise kuLuntu kunye neeQokelelo
I-Google + ifumana i-makeover yoyilo egxile kwizithuba ezibini: Iingqokelela kunye noLuntu.
UGoogle ususa i-Tasker eyaziwayo kwiVenkile yokudlala
Umsebenzi ngumsebenzi osuswe nguGoogle namhlanje kwiVenkile yokuDlala ngenxa yemvume esuswe nguDoze, kodwa kuhlobo lwe-beta kuphela.
IPushbullet Pro ifika nemiyalezo engenamda evela kwii -apps zemiyalezo, ukwabelana ngefayile ukuya kuthi ga kwi-1 GB nokunye okuninzi
IPushbullet ikhangela indlela yokwenza imali ngenkonzo yayo kwaye ngenxa yoko iyile iakhawunti ye-Pro ye- $ 4,99 ngenyanga ukufikelela kwipakethi yayo epheleleyo yokukhetha
I-Twitter ivavanya iimpendulo ezingakumbi ukongeza kwiintliziyo
Emva kokutshintshela entliziyweni, i-Twitter ilungiselela ukumiliselwa kweempendulo ezilandela umkhondo oshiywe nguFacebook ngeempawu zayo ezisixhenxe ezintsha.
IGoogle Fit iyahlaziywa kwaye ibandakanya umqeqeshi njengeendaba ezinkulu
IGoogle Fit ihlaziywa ngenoveli enkulu enje ngomqeqeshi wobuqu ogcina umkhondo wokutyhala kunye nokuhlala-phezulu okwenziweyo.
Amanqaku kaFacebook akhawulezileyo ngoku afumaneka kubasebenzisi be-India eIndiya
Umsebenzisi onefowuni ye-Android eseIndiya uya kuba nakho ukufikelela kumanqaku ngoko nangoko njengenye yezinto ezinqabileyo zikaFacebook.
Uhlaziyo lweMarshmallow lweNdlela evuzayo yezixhobo zeSamsung
Ukuhlaziywa kweMarshmallow kuhlaziya imephu yezixhobo zeSamsung kwezi nyanga zimbalwa zizayo.
IBlackBerry ithengisa zonke iiyunithi ze-Priv kwaye iphela kwisitokhwe kude kube nguDisemba
IBlackBerry ifumene impumelelo yokuqala encinci ngeBlackBerry Priv ngokuthengisa zonke iiyunithi kunye nokuphela kwesitokhwe kude kube nguDisemba
I-Xposed ngoku iyafumaneka kwi-Android Marshmallow 6.0
Abo baneselfowuni nge-Android 6.0 Marshmallow ngoku banokufaka isakhelo seXposed ukuze bakwazi ukufaka iimodyuli ezihlaziyiweyo.
I-Gmail iya kukwazisa xa ufumana i-imeyile engabhalwanga
UGoogle ufuna iinkonzo zakhe zikhuseleke ngakumbi ke, ukusukela ngoku ukuya phambili, i-GMail iza kukwazisa xa ufumana i-imeyile engabhalwanga.
Isamsung inokubonisa i-Galaxy S7 kwi-MWC 2016
Inkampani yaseKorea iSamsung inakho ukubonisa iflegi yayo elandelayo, iGPS S7, ngexesha leNkomfa yeHlabathi yeHlabathi ka-2016 eBarcelona.
Ewe, iingxaki ze-Wi-Fi zeZUK Z1 zikhona !!. Sikuxelela yonke into ngobungqina
Namhlanje, ngendlela yoqhankqalazo, sikubonisa zonke iingxaki ze-Wi-Fi zeZUK Z1, iingxaki, okwangoku, ezingasonjululwanga nangokuphuculwa kokugqibela okusemthethweni okhutshwe ngoNovemba 11.
Uvavanyo lwe-Facebook imiyalezo efana ne-Snapchat kwi-Messenger
I-Facebook ivavanya eFrance ngemiyalezo ethi inyamalale ngeyure kwi-Messenger yayo njengo-Messenger.
Umculo ku-YouTube ukumamela umculo owuthandayo ngokungapheliyo
Umculo ku-YouTube sisixhobo esitsha esisungulwe nguGoogle ukuba sisebenzise eli qonga kwaye sikhuphisane nxamnye neSpotify.
Izicwangciso zikaCyanogen zango-2016: ii-smartphones ezininzi ezinexabiso eliphantsi, i-CM13 kunye nesiphelo esiphakamileyo
Izixhobo ezininzi ezifikelelekayo, iCyanogenMod 13, kunye nesiphelo esiphakamileyo zonke ziyinxalenye yezicwangciso zeCyanogen zokwenza unyaka okhethekileyo.
I-Spotify ngoku icebisa iikonsathi ezikufutshane ezisekwe kwimidlalo oyithandayo
I-Spotify isungula iiKonsathi, uphawu olubonisa iikonsathi onazo kufutshane nommandla wakho kwaye zikwiminqweno yakho yomculo.
Isamsung yazisa nge-Exynos 8890
Umvelisi waseKorea uSamsung uzise into eza kuba yiprosesa elandelayo eza kuhamba kwiitheminali zayo zexesha elizayo, i-Exynos 8890.
Ukuphononongwa kunye nohlalutyo lweZUK Z1
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo olupheleleyo lweZUK Z1 imodeli yamanye amazwe.
Inkxaso yeminxeba yi-Android Wear entsha ebhengezwe nguGoogle
Inkxaso yeminxeba kwi-Android Wear yinto entsha ebhengezwe nguGoogle kwaye ivumela ii-smartwatches ukuba zizimele kwiselfowuni.
IBlackBerry Vienna yi-BB yesibini ye-Android ye-smartphone enoyilo lwesiko ngakumbi
IBlackBerry Vienna kukubheja kwesibini kwale nkampani yaseCanada kwi-Android kodwa nge-smartphone yemveli ngakumbi efana neklasikhi yayo.
I-LinkedIn ihlaziywa kwi-Design Design kwinguqu yayo ye-4.0
Okokugqibela i-LinkedIn ihlaziyiwe yaya kuguqulelo lwe-4.0 kunye naleyo yoyilo lweMpahla njengepateni yoyilo ekhoyo ngoku.
Zama iFireFox OS kwiselfowuni yakho ye-Android ngale APK elula yokuqalisa
Esi siqalisi seFirefox OS 2.5 sisivumela ukuba sazi ngokusondeleyo ukuba yeyiphi le nkqubo yokusebenza kwizixhobo eziphathwayo ngaphandle kokwenza enye into.
Tinder yazisa ialgorithm entsha yonxibelelwano
Iithebhu ezintsha kwiscreen sencoko, ialgorithm entsha kunye nolunye uphuculo, iTinder entsha, iapps yokuthandana eyimfuneko.
Yonke imidlalo yevidiyo yeNintendo yee-smartphones iya kuba simahla
I-Nintendo iceba ukuwela kumaqonga e-smartphone ahlukeneyo kunye nemidlalo eya kuba simahla
IXiaomi inokubandakanya izikrini ze-OLED kwiziphelo zayo ezizayo
IXiaomi inokubandakanya izikrini ze-LG OLED kwiziphelo zayo ezizayo, ezinokuthi zifike kwikota yesibini ye-2016.
Amarhe amatsha athi uGoogle angazenzela eyakhe ifowuni kwaye ayizukuba yi-Nexus
UGoogle ukwintetho zokuyila i-chip yakhe, enokuthi ikhokelele ekudaleni isixhobo sayo se-Android.
I-Periscope yazisa ngeseti entsha yeempawu: iimephu ezingcono, ukuqhubela phambili ngokukhawuleza kunye nokubuyela umva
I-Periscope isizisela uthotho lweempawu ezintsha ezinomdla zokusasaza umva kunye nezinto eziphuculweyo zemephu.
ICyanogen Yazisa ngeC-Apps Suite yaBasebenzisi beCyanogenMod
Njengokukhuphela ngokuzithandela, nawuphi na umsebenzisi ngoku unokukhuphela iphakheji yenkqubo ebizwa ngokuba yi-C-Apps, equlathe ezo zeefowuni zeCyanogen.
Iibhentshi zeHuawei P9 Max zihluziwe, irhamncwa
Iimpawu zomnxeba omtsha weHuawei, iHuawei P9 Max, zisandula ukuvuza. Isixhobo esiza kubonisa iprosesa enamandla yeKirin 950
Sihlalutya iselfowuni yeyona indala endlwini: I-Haier E-ZY i-Smartphone A6
Abadala bendlu okanye usapho zezona zinto ziya kuba nakho ukufumana okuninzi kule E-ZY ye-smartphone A6 evela eHaier esayihlalutya.
Lonke ulwazi malunga ne-chip entsha yeQualcomm Snapdragon 820
I-Qualcomm ibhengeza i-chip entsha ye-Snapdragon 820 ephinda kabini ukusebenza kunye nokusebenza kwe-Snapdragon 810 yangaphambili eyayineengxaki zobushushu
Ungazilungisa njani iimpazamo eziqhelekileyo ze-Nexus 5X
Sibonisa uluhlu lweengxaki ze-Nexus 5X kunye nezisombululo zazo ezinokubakho ukuze kusetyenziswe le mobile enkulu ye-Android kuyo yonke imilinganiselo yayo.
Nabani na onokudlula kukhuseleko lokuseta kwakhona kwifowuni ye-Samsung
Umsebenzisi ugqithisile kukhuseleko lokuseta kwakhona kwifowuni ye-Samsung kwimizuzu nje embalwa.
UGoogle uya kuba elungiselela iichips zakhe zee-smartphones
Ngokwimithombo yangaphakathi, inkampani yeNtaba yokujonga, uGoogle uzakulungiselela abaprosesa bayo ukubazisa kungekudala kwizixhobo zabo
Ingxelo yezimali yakutshanje yeHTC ivula ithemba kubatyali mali
I-HTC ikwazile ukuvuna iziphumo ezilungileyo kwingxelo yezemali yakutshanje ngo-Okthobha ophelileyo. Ngaba iya kukwazi ukuphakama eluthuthwini lwayo?
IXiaomi isungula ibhetri ye-20.000 mAh ngeBhanti ekhawulezileyo eyi-2.0 ye- $ 24
Ibhanki yamandla engama-20.000 24 yeXiaomi malunga ne- $ XNUMX yokutshintsha ukuze unike yonke ibhetri eyimfuneko kwi-smartphone yakho.
I-OnePlus: yonke into ekufuneka uyazi ngekamva lenkampani
I-OnePlus ineqhinga elicacileyo lokukhupha ikamva. Namhlanje sikufumanisa benenjongo yokuba ziinkokheli zentengiso.
I-YouTube iya ngokwenyani
I-YouTube sele ihambelana nenyani ebonakalayo kunye nombukeli weKhadibhodi esinokonwabela zonke iintlobo zeevidiyo.
IChronos ifuna ukujika nayiphi iwotshi ibe yiwatchwatch
IChronos ikuvumela ukuba uguqule iwotshi yakho yakudala ibe nye enemisebenzi ehlakaniphileyo yokufikelela kwizaziso nokunye okuninzi.
UGoogle ukhangela iqabane ukuba lenze iichips zalo kwizixhobo zalo ze-Android
Injongo kaGoogle kukulandela iinyawo zika-Apple xa esenza iichips zakhe ze-Android eziza kubandakanya izixhobo zakhe.
Nge-3 kaDisemba inokuba lusuku olukhulu lweXiaomi Mi 5
Ukuba iQualcomm iveza i-chip yayo entsha ye-Snapdragon 820 ngoNovemba 20, nge-3 kaDisemba inokuba yeyona ibonisa i-Xiaomi Mi 5 entsha.
IGoogle Drayivu ihlaziywa ngothotho lwezinto eziphuculweyo ukuze kwabelwane lula
I-Google Drayivu ihlaziywa ngenguqulelo entsha ethi ekugqibeleni iququzelele umsebenzi wokwabelana ngeefayile kunye nokuba zeziphi izaziso ezintsha.
UMI Emax Mini yokuNikwa
Thatha inxaxheba kwi-Androidsis UMI i-Emax Mini yokuzoba, ukuzoba kwilizwe liphela kunye neendleko zokuhambisa ezihlawulwe naphina emhlabeni.
I-Lumsing 10.400 mAh yebhanki yebhetri ye- € 19,99 eAmazon
I-10.400mAh ibhanki yebhetri evela kwiLumsing ngexabiso le- € 19,99 inokuba yinto efanelekileyo yokufikelela kumhla webhetri.
Iingcali zikaGoogle zifumana iziphene ezili-11 zezokhuseleko kwi-Galaxy S6 Edge kwiveki
Umda weGPS S6 uneziphene ezili-11 zokhuselo ezifunyenwe yiProjekthi Zero kwiveki nje enye yokuzikhangela.
Uhlalutyo lweDoogee F5, i-Phablet ye-Android evuselelayo ngexabiso elihlekisayo
Kolu hlalutyo sikubonisa yonke into asinika yona iDoogee F5, i-Android Phablet evuselelayo ngexabiso elihlekisayo.
Uhlalutyo lwe-UMI Emax Mini, uphononongo ngeSpanish
Namhlanje sihlalutya i-UMI EMax Mini, i-Android Lollipop eneenkcukacha ze-Android ekumgangatho ophakathi kwii-euro ezingama-130 nje.
Ngaba i-Samsung Galaxy S7 ixabisa i-10% ngaphantsi kweeflegi zangaphambili?
Isamsung inokuthi ithathe ingqalelo yokunciphisa ixabiso le-Samsung Galaxy S7 nge-10% xa kuthelekiswa nokwaziswa kwangaphambili ukuze ifikelele kwintengiso ye- € 600
Ukusilela ukubhengeza: IBlackBerry Priv iya kuxabisa i-euro ezingama-799 eYurophu
IBlackBerry iqinisekisile nje ngexabiso leBlackBerry Priv eSpain: iya kubiza i-euro ezingama-799, inani elihlazo elijonga ukhuphiswano.
IXiaomi Mi Band 1S, yayinokubona ukukhanya ngoNovemba olandelayo
Ukuhlaziywa kwesongo esineengcibi somenzi waseTshayina kungafika ngo-Novemba phantsi kwegama leMi Band 1S, ngenqanaba lokubetha kwentliziyo njengobutsha.
U-Nomad ubhengeza iwalethi yesikhumba kunye ne-2400mAh Battery Charger
UNomad usungule isipaji esiya kukuvumela ukuba ubize ifowuni yakho ngebhetri yayo eyi-2.400 mAh ngexabiso eli- $ 80.
Uhlaziyo lukaGoogle lokuHlawula i-Android kuhlobo 1.1
UGoogle usungule ingxelo entsha yenkonzo ye-Android Pay. Le nguqulo intsha iza ukulungisa iimpazamo nokunye okuncinci.
Iphazili yefowuni yefowuni yeemodyuli eza eIndiegogo
I-Puzzlephone iye e-Indiegogo ukuya kufumana inkxaso-mali eyaneleyo ukuze ikwazi ukuhambisa le fowuni ngoSeptemba 2016.
[APK] Ngoku unokumakisha imiyalezo njengezintandokazi kuWhatsApp
Kwi-WhatsApp ungasele ubeka uphawu lokubekisa umyalezo ukuze ufikelele kuluhlu onokulufumana kwiscreen esikhulu seapp.
Ion Belt, phatha ibhetri yakho esinqeni sakho ngeli bhanti likhethekileyo
Ion Belt yiprojekthi entsha kwiKickstarter ejolise ekubizeni ifowuni yakho ngebhanti yeebhulukhwe zakho.
Ukusebenza kuthenga umyili weCandy Crush Saga KUMKANI nge $ 5.900 yezigidigidi
Ukusebenza kuthengile uKumkani nge-5.900 yezigidigidi zeedola, esenza i-Candy Crash Saga kunye ne-Candy Crash Saga Soda yinxalenye yereferensi yayo.
Iphiko leProjekthi: Ukuhanjiswa kweGoogle Drone ka-2017
UGoogle uneprojekthi kwiiofisi zakhe phantsi kwegama elithi Project Wing. Emva kwakhe kukuhanjiswa kweedrone zikaGoogle ezinokufika kwi2017
Ukukhutshwa kukaGoogle Imifanekiso yoHlaziyo loKhuseleko lukaNovemba kwiZixhobo zeNexus
UGoogle upapashe uhlaziyo lwarhoqo ngenyanga lokusombulula iingxaki zokhuseleko kwizixhobo zeNexus, ngale ndlela zizenza zikhuseleke ngakumbi.
IBluboo Xtouch, ifowuni yokuqala eyenziwe ngeprinta ye-3D
Sele sikuxelele ngeBluboo Xtouch, isixhobo esinesikrini esinganyangekiyo ngenxa yokhuseleko lwaso lwe-5 mm yeCorning Gorilla
IHuawei Mate 8 iya kuziswa ngoNovemba 26
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besithetha ngokuboniswa kweprosesa ye-HiSilicon Kirin 950, i-SoC entsha eza kudibanisa i-Huawei Mate 8. kwaye ngokuthetha ngale fowuni inzima, ekugqibeleni sinomhla wenkcazo: I-HuaweiMate 8 iya kuziswa ngo-Novemba 26.
Isamsung kwiincoko zayo no-Sony ukuzisa inzwa yekhamera yeZ5 kwi-Galaxy S7 yayo entsha
Inzwa ye-IMX300 ye-Sony Xperia Z5 ngokuqinisekileyo iya kuba sisixhobo sekhamera esiya kusetyenziswa yi-Samsung Galaxy S7 entsha eza kufika ngoJanuwari 2016.
I-Counter Strike kunye neentsomi zayo "Umlilo emngxunyeni" kungekudala kwi-Android yakho
I-Counter Strike yasentsomini iphantsi kophuculo liqela elifuna ukulibeka kwi-Android ukuba naloo mlilo usemngxunyeni kwakhona!
I-Xperia Z5 ilindele ukwanda kwebhetri enkulu kunye neMowudi yeStamina kwi-Android 6.0 Marshmallow
Ngokudibana ne-Doze kunye ne-Sony's Stamina Mode, i-Xperia z5 izakubonisa i-Android 6.0 Marshmallow enobomi obukhulu bebhetri.
Iprosesa entsha yaseKirin 950 ingabhengezwa nge-5 kaNovemba
Iprosesa entsha yeHuawei, iKirin 950, inokuboniswa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
IBluboo Xtouch, ifowuni enganyangekiyo emelana nokubethwa kwesando
Namhlanje ndiza kuthetha ngeBluboo kunye neBluboo Xtouch yayo enomtsalane, ifowuni emi ngokuchasene nescreen sayo.
Imbeko iya kuqala ukuhlaziya iiterminal zayo kwi-Android 6.0 ngoFebruwari
INhlonipho ibhengeze ngeakhawunti yayo ye-Honor India iimodeli zomenzi waseAsia oza kufumana i-Android 6 M. Kwaye ewe, iNhlonipho 0X iphakathi kwabo
I-Titanfall franchise eyaziwayo kwindlela eya kwi-Android ngo-2016
I-Titanfall yi-franchise ebonakalayo kumdubuli wayo okumgangatho ophezulu ofumene amabhaso amaninzi kwaye aya kufika kwi-Android kunyaka olandelayo.
Uhlelo lokusebenza lukaGoogle oluthinjiweyo ngoku lungahlela iifomathi kwifomathi yeRAW
I-Snapseed ifumene uhlaziyo olukhulu olunikezela njengeyona nto inokubanakho ukuhlela iifoto kwifomathi yeRAW.
I-ChromeOS kunye ne-Android ziya kudityaniswa ngo-2016
Ngokwimithombo yangaphakathi kuGoogle, iChannelOS kunye ne-Android ziya kudityaniswa kungekudala. Iya kuba ngo-2016, xa kwaphehlelelwa uhlobo lwe-beta kwaye ngo-2017 ingxelo ezinzileyo
I-OnePlus iququzelela uvavanyo kunye nee-headphone zayo ezintsha ze-Icon kwaye ipapasha iimpendulo zomsebenzisi
I-OnePlus isungule isibhengezo esinomdla apho ibonisa khona iingcali ezininzi kwicandelo kuvavanyo lwee-headphone ze-OnePlus Incons.
Ividiyo entsha ibonisa zonke iimfihlo zeBlackBerry Priv
Namhlanje sikubonisa ividiyo yokwazisa yakutshanje yeBlackBerry Priv epapashwe yiBlackBerry apho zibonisa zonke iinkcukacha zale BlackBerry ine-Android
I-OnePlus X sele isemthethweni kuluhlu oluphakathi kwezona zilungileyo
I-OnePlus izakufika ngo-Novemba 5 ngenkqubo yesimemo eya kuhlala ngqo kwinyanga yokuqala kwaye emva koko ungayithenga kwiwebhu
IMiitomo ngumdlalo wokuqala weNintendo
IMiitomo yeyokuqala kwezi zintlanu zokusebenza esiza kubona ukuba ziyafumaneka kule minyaka mibini izayo kwaye sisiseko soko kulandelayo.
Isamsung yazisa ngengeniso yayo yokuqala kwiminyaka emibini
Kokokuqala kwiminyaka emibini edlulileyo ukuba iSamsung yenze inzuzo, ebonisa ukubuyela kwimeko yesiqhelo somenzi waseKorea.
[Khuphela i-APK] Ngoku ungazoba amanqaku akho eGoogle
I-Google Keep idibanise into entsha ukuze wenze amanqaku akhawulezayo ngokulula ukudweba ngomnwe wakho.
I-Huawei Mate 8 inokuboniswa ngoNovemba 5
Kulindeleke ukuba nge-5 kaNovemba, iHuawei izakuveza iprosesa yayo yeKirin 950 kunye nefowuni yokuqala eya kuyiphatha: I-Huawei Mate 8
Kungekudala uza kuba nakho ukurekhoda kwaye wabelane ngemidlalo yakho kwiMidlalo yeGoogle Play
UGoogle ufuna ukugxila kwimidlalo kwaye ngoku unikezela amandla okurekhoda kunye nokwabelana ngemidlalo kwiMidlalo yeGoogle Play.
IMicrosoft idibanisa ii -apps ze-Acompli kunye ne-Sunrise kwi-Outlook ehlaziywe ngokupheleleyo
IMicrosoft isebenza ukuzisa usetyenziso lwe-Outlook oluhlaziyiweyo oluqukethe ezona zintle zeAcompli kunye neLanga. Iziphumo ezintle zinokunika.
Sivavanye ikhamera ebalaseleyo yeNexus 5X
I-Nexus 5X yayisezandleni zethu ukukhangela umgangatho wobuncwane beelensi kunye nendlela eziphatha ngayo isoftware kwangaxeshanye.
[APK] I-Telegram 3.2.5 ifika kunye ne-emoticon ye-comb kunye nezinye iindaba
Inguqulelo entsha yeTelegram izisa i-comb emoticon entsha eyayikhethekile ku-WhatsApp. Ijoyina amanqaku amatsha esibonakalayo.
Iipodcasts, into entsha emnandi kuGoogle Play Music
Ukudlala umculo kuGoogle sele kuvumela ukufakwa kweepodcast kwinkonzo yayo, nangona kuya kufuneka ukulinda abasebenzisi ukuba bafikelele kuyo.
Isamsung isebenza neQualcomm kwi-Snapdragon 820 entsha
Ngokwe-Business Korea, i-Samsung izakwenza iprosesa elandelayo yeQualcomm, iSnapdragon 820. Ukwenza oku, iya kusebenzisa inkqubo ye-14-nanometer yeFinFET yokuvelisa, efanayo naleyo isetyenziswe kwi-Exynos 7420.
IProjekthi yeNtlambo, igama lefowuni yeselfowuni yokuqala enokusongwa
Isamsung inokusebenza kwifowuni entsha enePod V okanye iProjekthi yeNtlambo. Imfihlo yakho? iya kuba nescreen sokusonga
I-perch ijika ifowuni yakho endala okanye ithebhulethi kwinkonzo yokubeka iliso ekhayeni lakho
I-Perch yinkqubo ejolise ekufumaneni iselfowuni yakho yakudala ukuze ibeke iliso kwimimandla ethile yekhaya lakho kwiwebhusayithi yayo.
I-Samsung Pay, ngaphezulu kwesigidi sabasebenzisi eKorea
Ukuhlawula ngezixhobo zethu eziphathwayo kwakuyinyani kangangexesha elithile, kodwa kungoku nje ukuqalisa kokuqalisa ...
ILeTV ibhengeza iiLe 1s, iselfowuni ebiza ixabiso eliphantsi enomzimba wentsimbi kunye nezixhobo ezikhulu
I-LeTV Le 1s sisiphelo esinomzimba wentsimbi onehardware enkulu kwaye uza ngexabiso elifikelelekayo kuyo yonke into ayibonisayo.
I-MIUI 7 ngoku iyafumaneka ukusukela namhlanje
UXiaomi usungula ngokusesikweni namhlanje inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza, MIUI 7.
I-Facebook ithatha izaziso ngamanqaku ezemidlalo, imihla yokuzalwa kunye nokunye ukuya kwelinye inqanaba
Ngoku izaziso ku-Facebook ziya kwelinye inqanaba ukubonisa iziphumo zemidlalo okanye izakuba yintoni imicimbi yendawo yamaphepha esiwathandayo
Ixabiso le-HTC One A9 lonyuswe nge-100 yeedola ngokusungulwa kwayo ngo-Novemba 7
I-100 leedola kukunyuka kwexabiso leHTC One A9 entsha eza kuthi ibethe ishelfu ngoNovemba 7 eMelika.
Ii -apps zeBlackBerry Priv zivela kwiVenkile yokudlala ngaphambi kokumiliselwa
Kwivenkile yokudlala unokufumana zonke iiapps zeBlackBerry Priv ukuze uqinisekise unyango oluya kunikwa yile nkampani kuhlaziyo.
Ngaba iBlackBerry Priv iya kuphumelela kwintengiso ukuba ekugqibeleni ixabisa i-euro ezingama-699?
Inqaku lezimvo apho ndihlalutya khona amathuba e-Blackberry Priv kwintengiso yangoku. Ngaba i-Android yokuqala yeBlackBerry iya kuphumelela?
Ezinye izikrini ze-Nexus 5X zikhangeleka zityheli, kodwa ungakhathazeki ukuba uGoogle uyitshintsha ifowuni
Abasebenzisi abaliqela bakhalaze ukuba i-Nexus 5X screen inika iithowuni ezityheli, impazamo esele siyibonile kwi-Nexus 4 nakwi-Nexus 5
Uyilo kunye nexabiso le-OnePlus X lihluziwe
Uyilo olunokwenzeka kunye nexabiso le-OnePlus X, eliya kuxabisa phakathi kwe-270 kunye ne-300 ye-euro, liye lavuza ngokungqinelana nokuvuza kwe-Weibo
Esi sisiphelo sendlela entsha ye-OPPO, i-OPPO Neo 7
Umvelisi waseAsia usizisile isiphelo sayo esitsha, i-Oppo Neo 7.
I-Fairphone 2 iyafumaneka ngoku, eyona ilula yeselfowuni ukuyilungisa
I-FairPhone 2 yifowuni yeemodyuli kodwa yahluke ngokucacileyo ngokuvumela abasebenzisi ukuba basuse iindawo ezinesiphene kwaye bayilungise ngokulula.
I-Elephone iya kuhlaziya i-P6000 kunye ne-P8000 kwi-Android 6.0 Marshmallow
U-Elephone ufuna ukuphucula. Awufuni ukuba ngumvelisi waseTshayina otyhafileyo xa kuziwa kuphuculo. Ke ngoko, iya kuhlaziya ii-mobiles zayo kwi-Android 6.0
INintendo malunga nokuveza umdlalo wayo wokuqala wevidiyo kwizixhobo eziphathwayo
UNintendo ubizele umatshini wokushicilela kule veki kwinkomfa yemithombo yeendaba apho umdlalo wevidiyo yakhe yokuqala eza kutyhilwa.
Ikati yakho ihlala ikho ikhola ye-Weenects Cats nge-GPS
Ngeeenect Catas unokuba nesilwanyana sakho sasekhaya ngamaxesha onke kunye nezinto ezahlukeneyo ezinje ngokuba nakho ukumbiza.
'Hey Cortana' ngoku iyafumaneka kwi-Android
Ngoku "ungabiza" uCortana ngomyalelo welizwi 'Hei Cortana' kwi-Android okoko yahlaziywa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Eminye imifanekiso evuzayo ibonisa iApple Music kuhlobo lwayo lwe-Android
Sele sinemifanekiso evuzayo yeApple Music, intshayelelo yokufika kwangoko kwale nkonzo yomculo eza kukhuphisana nabanye.
Xiaomi Mi4c, uphononongo ngeSpanish
Namhlanje sihlalutya ngokucokisekileyo isiphelo esitsha seXiaomi esisemilebeni yomntu wonke. Isiphelo asiyiyo enye ngaphandle kweXiaomi Mi4c, isiphelo esimnandi se-Android ngexabiso elihlekisayo.
Iikhosi ezi-8 eziqinisekisiweyo nezasimahla zikaGoogle ongenakuziphosa
UGoogle, uRhulumente waseSpain kunye neeDyunivesithi ezininzi basungula iikhosi ezisi-8 zasimahla neziqinisekisiweyo ezinokuthathwa ngumntu
Ixabiso leBlackBerry Priv eMelika liqinisekisiwe: iidola ezingama-699
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besikhankanyile ukuba kungenzeka ukuba ixabiso leBlackBerry Priv eSpain libe malunga ne-799 euro. Inani eligqithisileyo, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba sisixhobo sokuqala seBlackBerry esine-Android kwaye umenzi kufuneka angene ngokukhawuleza kwintengiso.
Ngokuka-AnTuTu, iMeizu Pro 5 yeyona fowuni inamandla kwintengiso
Ngokwengxelo yamva nje epapashwe yindawo eyaziwayo ye-AnTuTu, iMeizu PRO 5 yeyona fowuni inamandla kwintengiso.
I-Samsung Galaxy On5 kunye ne-Galaxy On7 ngoku baseburhulumenteni e-China
I-Galaxy On5 kunye neGalaxy On7 sele iqalisiwe e-China kwaye iya kufikelela kwixabiso elihle kakhulu elinikezela ngesixhobo esidityaniswe kakuhle sesiphelo esisezantsi.
I-smartphone yakho yajika yaba yidrone kukubheja okukhulu kweFowuniDrone Ethos
Idrone ebhabha yile nto iya kuba yiyo i-smartphone yakho xa uyidibanisa neFowuniDrone Ethos, eyona inomdla kakhulu evela kwiKickstarter.
I-Facebook ngoku ikuvumela ukuba usebenzise i-injini yokukhangela ukufumana izithuba zoluntu
I-Facebook FYI linyathelo lokuqala lokuba ukwazi ukufumana izithuba zasesidlangalaleni ngokusebenzisa le nethiwekhi yokunxibelelana kwaye ke ukwazi ukunika ingxelo kwezona zihloko zishushu
Umongameli kaXiaomi ubonakalisa iimpawu zokungena kwakhe kwimakethi yaseMelika
Emva kokufunda indlela uHuawei ngoku athengisa ngayo e-China, uXiaomi ucinga ngakumbi ngokujolisa kwimakethi yase-US
I-Huawei ngoku yeyona nto ithengisa kakhulu e-China e-China
I-China ngoku lilizwe elilungileyo ukulinganisa inqanaba labona bavelisi babaluleke kakhulu abanjengoHuawei, ophumeleleyo kule kota yokugqibela.
Isamsung ilungiselela i-Galaxy On5 kunye ne-On7 ukubuyela kwiiplastiki kwakhona kwaye ibe yile nto yayiyiyo ngaphambili
I-Galaxy ON5 kunye ne-Galaxy ON7 zenziwa eIndiya kwaye ziya kuboniswa kwezi veki zizayo njengeetheminali ezimbini ezinexabiso eliphantsi.
[APK] IParchi sisixhobo esikhulu esitsha sokuthatha amanqaku akhawulezileyo kwiMicrosoft
IMicrosoft isungule iapps entsha ebizwa ngokuba yiParchi ukuba ithathe amanqaku akhawulezayo kwaye kwinguqulelo yayo yokuqala iyamangalisa indlela eziphatha ngayo.
I-TapDeck yongeza 'Ukuqokelelwa', umsinga weemifanekiso ezivela kudidi oluthile
Iingqokelela zezakutshanje ezivela kwi-TapDeck yokufikelela kwezona wallpapers zintle onokuthi uzongeze kwidesktop yakho yefowuni ngokucofa kabini.
I-Fossil ibhengeza uMseki wayo we-Q onxibekayo nge-Android Wear
I-Android Wear yinguqulelo yesoftware yoMsunguli weFossil Q, enye yeewatchwatches ezine ezibhengezwe yile brand brand.
I-YouTube Red, inkonzo ye-YouTube ye-premium engenasimahla, ukudlala ngasemva, kunye nokunye
I-YouTube Red yinkonzo yeprimiyamu engenazintengiso yeevidiyo, ukudlala ngaphandle kweintanethi, ukudlala ngasemva, kunye nokubhaliswa komculo.
Isamsung ilungisa ithebhulethi ene-18,5-intshi ngeGlass View
I-Samsung Galaxy View yithebhulethi enkulu ene-intshi ye-18,5 kwaye sinokubona kule mifanekiso.
I-Snapdragon 820 inokuba yi-50% enamandla ngakumbi kune-Exynos 7420
Ngokwamahemuhemu amva nje, iprosesa kaQualcomm, i-Snapdragon 820 inokuba ngcono ngama-50% kuneprosesa yakwa-Samsung, i-Exynos 7420.
Ifumaneka kwiAmazon Premium Photos, ukugcinwa okungenamda kubasebenzisi bePremiyamu
Iifoto zeAmazon Premium yimbonakalo yale nkampani kukhetho lukaGoogle kunye neefoto zalo ukuze nawuphina umsebenzisi oneNkulumbuso akwazi ukufikelela mahala.
I-MIUI 7 iya kufika nge-OTA ngo-Okthobha u-27
Inguqulelo elandelayo yenkqubo yokusebenza yeXiaomi esekwe kwi-Android, MIUI 7, iza kufika nge-27 ka-Okthobha nge-OTA.
Iwotshi ye-BEDDI iya kukuqalisa kwi-intanethi yezinto ezisendlwini yakho
I-BEDDI sisindululo esinomdla kakhulu esivela kwiKickstarter yewotshi ye-alam eqhagamshela kwi-Intanethi yeZinto.
Iifoto zikaGoogle zigqitha kubasebenzisi abazizigidi ezili-100
Iifoto zikaGoogle namhlanje zophula irekhodi ngokufikelela kubasebenzisi abazizigidi ezili-100 kwiinyanga ezintlanu kuphela zobomi.
I-Misfit ibhengeza i-Shine 2: intshukumo entsha yemoto, i-slimmer kunye nezibane ezinemibala ye-LED
IMisfit Shine 2 iya kuba nakho ukufumana isicatshulwa kunye nezaziso, ngaphandle kokunganyanzelekiyo kwamanzi kunye nezo nyanga zintandathu zobomi bebhetri.
Iqonga leNVIDIA leGeForce NGOKU leMidlalo yokuSasaza ngoku iyafumaneka
I-NVIDIA isandula ukumisela iqonga leGeForce NGOKU kunye nemidlalo engama-70 ukonwabela eyona midlalo ilungileyo ngokusebenzisa ikhonsoli yakho yeSHIELD.
I-HTC One A9 ngoku isemthethweni: 5, AMOLED isikrini, 2 / 3GB ye-RAM kunye ne-Snapdragon 617 chip
I-HTC isandula ukubhengeza i-A9 yayo entsha eza nesiseko sokuba yenye yezona zinto zibheja kakhulu kumenzi waseTaiwan ngeKrisimesi njengokuphoswa nje kwelitye
Iiapps zemithombo yeendaba kwezentlalo zezona zisebenzisa elona bhetri ngokwe-AVG
I-AVG isungule isifundo esibonisa ii -apps ezili-10 ezisebenzisa obona bomi bebhetri kwaye zichaphazela ukusebenza.
Isamsung iya kukulungela ukulindela ukufika kweGPS S7 ngoJanuwari
Isamsung iceba ukumilisela iGPS S7 ngoJanuwari ukuze ikhuphisane ngokuchasene neefowuni ezintsha ezivela kukhuphiswano ngqo noApple.
[APK] Iimephu zikaGoogle 9.16 zongeza ukukhangela indawo ekuma kuyo ngokukhawuleza kwindlela yangoku
Iimephu zikaGoogle 9.16 zivumela ukukhangela ngokukhawuleza kwezitishi zepetroli, iivenkile kunye neeresityu zokumisa ngokukhawuleza.
Ngoku ungavavanya iinguqulelo ezintsha zoPhendlo lukaGoogle ngokuthatha inxaxheba kwinkqubo yayo ye-beta
Ngoku unokuba yinxalenye yenkqubo yokukhangela kuGoogle ngaphandle kokuya kuthabatha inxaxheba kuluntu lwe-beta.
Mi TV3, i-Xiaomi smart TV ye-4K kunye nee-intshi ezingama-60 nge-Android 5.1 ngexabiso le- € 690
IMi TV3 ukubheja kweXiaomi njenge-Smart TV kwaye ibhengeze namhlanje kumsitho apho ibonise khona i-skateboard enamavili ama-2.
I-Threema, i-app yemiyalezo ekhuthaza ukhuseleko
I-Threema sisicelo esigxile ngqo kukhuseleko nakubucala babasebenzisi, ke ngoko kukuzihlukanisa ne-WhatsApp.
I-Droid Turbo 2 kunye neMaxx 2 ziqinisekisiwe ngokuvuza
IMotorola izakusizisa ngo-Okthobha i-27 ii-DROIDs ezimbini ezintsha: iDroid Turbo 2 kunye neDroid Maxx 2 enescreen esingenakwaphuka njengoko isitsho.
I-Oppo R7s ibhengezwe nge-4GB ye-RAM kunye ne-5,5 ″ AMOLED isikrini
I-Oppo R7s, i-smartphone enomzimba wentsimbi, i-5,5 "AMOLED isikrini kunye ne-4GB ye-RAM, ibonisiwe ngokufika kwayo eYurophu ngoDisemba.
Guqula i-smartphone yakho ibe ngumlawuli weconsole ukuze udlale iAirConsole
I-AirConsole liqonga elitsha lokudlala apho ungonwabela imidlalo eyahlukeneyo enento enkulu yokudlala kunye ne-NES emulator.
Ezi zixhobo zeHuawei eziza kuhlaziya kwi-Android 6.0
IHuawei ipapashe uluhlu lwezixhobo eziya kuhlaziywa kuhlobo lwamva nje lwe-Android, 6.0.
Isamsung ye-Samsung S7 iza kuza nesidibanisi sohlobo C lwe-USB
NgokukaSammobile, elandelayo Samsung Galaxy S7 iya kuba nesinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB ukongeza kwinkqubo yokutshaja ngokukhawuleza.
2 zokusebenza ukwenza iindlela ezimfutshane zedesktop
I-2 iiapps ezilula zokwenza iindlela ezimfutshane ngaphandle kwaso esinye isiseko ngaphandle kwale. Simahla ukukhuphela.
Ividiyo entsha ibonisa uyilo lweBlackBerry Priv
Ividiyo entsha ibonisa i-BlackBerry Priv ngokweenkcukacha, apho sinokubona khona iinkcukacha zebhodibhodi okanye iscreen secala lesixhobo
Yazisa, insiza entsha ye-Facebook efuna ukoyisa izaziso zakho ngeendaba ngexesha lokwenyani
Yazisa i-app entsha ye-Facebook eza kuphehlelelwa kungekudala ukuzama ukoyisa indawo yokwazisa ngazo zonke iintlobo zeendaba ngexesha lokwenyani.
Imeyile ye-Yahoo 5.0 iza nembonakalo entsha, indlela entsha yokungena kunye nokulawula iiakhawunti ezingezizo ze-Yahoo
Imeyile ye-Yahoo 5.0 isizisa kwizinto ezininzi ezintsha ekufuneka sizithathele ingqalelo ezinje ngombono omtsha kunye nokubanakho kokusebenzisa i-AOL, Outlook kunye neHotmail.
Iphepha ngumbono omtsha weDropbox wendlela amaqela anokusebenzisana ngayo
IDropbox ibhengeze iPhepha, uthotho lwezixhobo zokusebenzisana eziza nombono wokuba yinto entsha yokusebenza kweqela.
Ivenkile kaGoogle yokudlala iya kulungelelaniswa kwakhona zibe ziiapps / imidlalo yevidiyo kunye nokuzonwabisa kuyilo olutsha
Kungekudala siza kuba nohlaziyo olutsha lweVenkile yokuDlala kuGoogle eya kuthi inemixholo eyahlulelwe usetyenziso / imidlalo yevidiyo kunye nokuzonwabisa.
Indawo yokuHamba ifumana uHlaziyo ngoGcino lwamafu, indlela yokuSinda, kunye nokunye
Indawo yokuhlala ikhupha uhlaziyo lwayo lokuqala ngogcino lwamafu, imo yokusinda kunye nokunye okuninzi okongeza umxholo kumdlalo.
[APK] Ngoku ungasasaza imidlalo kwisixhobo sakho se-Android kuMdlalo we-YouTube
Nge-APK esiyibonelelayo ungaqala ukusasaza imidlalo kwifowuni yakho ye-Android okanye ithebhulethi ngeapp ye-YouTube yeMidlalo.
UGoogle uphakamisa uGoogle Play Music ngevidiyo engama-360º
UGoogle upapashe ividiyo ye-360º yokukhuthaza uMculo kuGoogle.
I-BLOCKS okanye ingaba yintoni iProjekthi Ara yeewotshi ezifanelekileyo
I-BLOCKS liqonga elilandela imeko enikezwe yiProjekthi Ara, kodwa apha ngeewotshi ezilumkileyo ezilumkileyo.
Uhlelo lokusebenza lweMicrosoft Dialer oluza kuza ekupheleni konyaka luza kuthatha indawo kwifowuni yakho
Uhlelo lokusebenza lweMicrosoft Dialer lujolise ekubeni lusetyenziso oluthandayo lokwenza iifowuni zesiko okanye ukusebenzisa uqhagamshelo lwe-2G okanye lwe-3G ukusuka esiphelweni sonyaka.
I-LG iya kuqala ukukhupha i-Android 6.0 Marshmallow kwiveki ezayo kwi-G4
I-LG iya kuqala ukukhupha i-Android 6.0 Marshmallow kwi-LG G4 kwiveki ezayo ePoland, ilandelwe yimimandla yonke.
Meizu M2, uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha ngexabiso elifikelelekayo
IMeizu M2 iyafumaneka nge-130 euros ukufumana lonke ulwazi lwe-Android kwifowuni ene-5-intshi yesikrini kunye ne-64-bit quad-core chip.
[APK] Ukujonga kwangaphambili kwee-URL, yintoni entsha kwi-WhatsApp
Inqaku ebelikade likwiTelegram okwethutyana kwaye esele sikwazi ukufikelela kulo kuWhatsApp ngumboniso wekhonkco le-URL.
Umyalezo wokuhambisa imiyalezo ngokuya kufikelela esiphelweni
Enye insiza eya ekupheleni-ukuya-ekupheleni ukubethela nguLayini kwaye ilandela indlela ebekwe yiTelegram kunye nezinye iinkqubo ezifanayo
Imiboniso ye-8K, isisombululo esilandelayo see-smartphones kunye neetafile
Okwangoku kwintengiso sifumana izikrini ezinesisombululo se-2K kunye ne-4K. Iifowuni zekamva ziya kuxhotyiswa ngemiboniso ye-8K.
Yonke into ilungele ukwenziwa kwe-OnePlus X ngo-Okthobha u-29
I-OnePlus sele inayo yonke into ekulungeleyo ukubonisa ifowuni yayo entsha ye-OnePlus X ngo-Okthobha u-29, eya kuthi ibonakaliswe ngenkangeleko ebonakalayo ebonakalayo.
I-HTC ilungiselela 'ukuvela okulandelayo kwaLowo' ngo-Okthobha u-20
I-HTC One A9 iselfowuni eneempawu ezithobekileyo eziza kuboniswa nge-Okthobha ye-20 eNew York kwaye eya kuba neTidal njengenkonzo yokusasaza.
I-DxOMark ibonisa ukuba ikhamera ye-iPhone 6s ayilunganga njengaleyo yeefowuni ezithile ze-Android
I-DxOMark yiwebhusayithi apho bavavanya ngononophelo iikhamera zazo zonke iimoto ezihambelanayo zomzuzu. Bavavanya ikhamera ye-iPhone 6s
IVLC 1.6 ihlaziywa ngeemvume ezimbalwa ezifunekayo, ukuphuculwa kokusebenza kunye nenkxaso ye4K
IVLC ifumana uphuculo oluninzi kuhlaziyo olukhulu olubonisa ukunciphisa inani leemvume kwaye ingaba yintoni inkxaso ye4K.
Eminye imifanekiso yeBlackBerry Priv kunye nemizekelo yokuthwebula kuthathwe nge-sensor yayo ye-IMX230
Ngalo lonke ixesha sisazi ngakumbi ngeBlackBerry Priv, ifowuni eya kuthi ibe neempawu ezintle zeBlackBerry kunye ne-Android.
U-TAG Heuer wabelana ngomfanekiso we-teaser weswatchwatch yabo edityanisiweyo kunye nomhla wentetho yabo
I-TAG Heuer exhunyiwe yi-smartwatch yokuqala evela kumenzi wewotshi waseSwitzerland eya kuthi thaca ngoNovemba 9.
Ngubani othatha iifoto ezikhanyayo eziphantsi, i-Nexus 6P okanye i-iPhone 6?
Umsebenzisi uthathe uthotho lweefoto kwiimeko eziphantsi zokukhanya ukubonisa umahluko phakathi kweNexus 6P kunye ne-iPhone 6
I-Waze ibonisa kwiindawo ezahlukeneyo ze-infographics ezizezona lizwe zibalaseleyo nezona zimbi ukuqhuba kuzo
UWaze ukhuphe uthotho lwe-infographics ebonisa ulwazi olunomdla kakhulu kuwo onke amazwe awona ahamba phambili ekuqhubeni.
UHiroshi Lockheimer, intloko entsha ye-Android kunye neChannel
USundar Photosi wayenoxanduva lwe-Android kunye neChannel, de wabizwa njenge-CEO yeGoogle. Ngoku isithuba sakhe siya kuthathwa nguHiroshi Lockheimer.
Uyifumana njani indawo eyakhelwe ngaphakathi yokuphononongwa kwifayile kwi-Android 6.0 Marshmallow
I-Android 6.0 Marshmallow izise amanqaku amaninzi, enye kukudityaniswa komhloli wefayile ofihlwe kuseto.
UGoogle ubonakalisa amandla kaGoogle ngoku kwiividiyo ezintathu ezintsha
UkuKhangela kuGoogle ngoku kunye nokuKhangela kuGoogle kufihla amandla amakhulu kwifowuni yakho njengoko ezi vidiyo zintathu zibonisa.
Uyifumana njani iPhablet VKWORLD vk700 Pro yee-euro ezingama-52 kuphela
Namhlanje sichaza indlela yokufumana i-VKWORLD vk700 Pro ngee-52 zama-Euro kubandakanya iindleko zokuhambisa.
Isamsung ibuyela kwindlela yenzuzo kwisiqingatha sokugqibela
Isamsung ibuyela kwiingcambu zayo kancinci kwikota yokugqibela ngengeniso engcono xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo
Ukucoca iintsomi zebhetri kwi-smartphone
Sikhanyisela esinye sezihloko ezibangele oyena tedium okoko saba ne-smartphone, ubomi bebhetri kunye neentsomi kunye neentsomi.
Uyonwabele njani iqhosha elitsha lokuphendula ku-Facebook kwi-Android
Namhlanje sichaza yonke imisebenzi emitsha yeqhosha lokuphendula likaFacebook kunye nendlela yokuyonwabela kwi-Android ngaphambi kokuba isicelo esisemthethweni sihlaziywe ngokusemthethweni.
Iqhosha elitsha likaFacebook elithi "Like" ngeempendulo zalo ezahlukeneyo
Ukuphendula kuFacebook "Njengo" ziintlobo ezahlukeneyo zeemvakalelo ezivumela umsebenzisi ukuba abone ngcono impendulo yabo kwisithuba.
Iimpawu ezincinci ezili-10 kodwa ezinomdla ze-Android 6.0 Marshmallow onokungazazi
I-Android 6.0 Marshmallow inothotho lwezinto ezincinci kodwa ezinamandla esizozichaza kule migca kwi-Androidsis.
Icocekile i-Android okanye uLuhlu lweSiko loMenzi?
Kukho abavelisi abaliqela abakhetha ukumilisela ifowuni ngohlobo olunyulu lwe-Android, ngelixa abanye beqhubeka nokubheja kulungelelwaniso lwabo lwesiko.
Inguqulelo kaSony emsulwa ene-'Concept ye-Android 'iya eMarshmallow kwaye ifikelela kumazwe amaninzi
'Ingqondo ye-Android' ihlaziywa kwiMarshmallow ukufikelela kumazwe angaphezulu ukuya kuthi ga kuvavanyo lwe-beta lwe-10.000 ezine-Xperia Z3 kunye ne-Z3 compact.
ILollipop sele ikho phantse kwizixhobo ezine ze-Android
I-Android 5.0 Lollipop ifumaneka phantse kwizixhobo ezine ze-Android ngokwamanani akutshanje anikezwe nguGoogle uqobo.
Le yindlela i-Android eguqukele ngayo kwi-Android 6.0 Marshmallow
Ukuthatha ithuba lokukhululwa kwakutsha nje kwe-Android 6.0 Marshmallow senza uphononongo olubonakalayo lwazo zonke iinguqulelo ze-Android okoko yabonakala
Ukupholisa ulwelo kwi-smartphone ebalulekileyo kwikamva
IMicrosoft Lumia 950 XL ine-chip ye-Snapdragon 810 kunye nokupholisa ulwelo ukugcina le processor ikwiqondo lobushushu elifanelekileyo.
Ibhentshi elitsha le-Samsung Galaxy S7 laphula zonke iirekhodi
Iibhentshi ezintsha zityhilekile zibonisa amandla amangalisayo e-Samsung Galaxy s7 kunye neprosesa ye-Exynos 8890, isaphula zonke iirekhodi.
IBlackBerry Priv iya kuba nakho ukurekhoda iividiyo kumgangatho we-4K
Iinkcukacha ezintsha zeBlackBerry Priv ziyahluzwa, eziza kuba neprosesa engama-64 ukongeza ekuvumeleni iividiyo ukuba zirekhodwe kumgangatho we4K.
Ungayitshintsha njani ibha yesaziso ye-Android ukuze ube smart
Namhlanje sikufundisa ukuba utshintshe ibha yesaziso ye-android yakho ukuze ube ekrelekrele ngakumbi kwaye uyasebenza.
UXiaomi uphandwa ngurhulumente wase-China ngeendlela ezimbi zentengiso
UXiaomi uphando ngurhulumente wase-China ngokwaphula umthetho wokhuphiswano wentengiso.
Uvandlakanyo lwe-INNJOO LOKUQALA kunye noHlahlelo
Namhlanje sikushiya olu hlaziyo lupheleleyo kunye nohlalutyo lwe-INNJOO ONE 4G, isiphelo sendlela esigqibeleleyo sigqibezela ubuhle kunye nobuhle.
UGoogle unokuzisa iiapps zakhe Windows 10
Ukuba uGoogle usungule iiapps zakhe njengendawo yonke Windows 10, inokukhokelela ekubeni ifakwe kwiXbox One kunye Windows 10 Iselfowuni.
Ikhamera yeXperia Z5 yeyona ilungileyo ngalo mzuzu
Nangona kukuxabisa kuthotho lweemvavanyo ezivela eDxomark, sisikhalazo esiqhelekileyo sokuba ikhamera yeXperia Z5 yeyona ilungileyo ngoku kwiselfowuni.
Uvavanyo lweXiaomi Redmi Qaphela2. UXiaomi ukwenzile kwakhona, isiphelo esikhulu esingaphantsi kwama-200 euros
Kolu hlalutyo lupheleleyo kunye nokuphononongwa kwevidiyo yeXiaomi Redmi Note2 sikubonisa ukuba kunokwenzeka njani ukuba unxibe isiphelo sendlela esikhulu seeyure ezingama-150.
Uhlaziyo olusemthethweni lwe-LG kwi-Android 6.0 Marshmallow
Kuluhlu olufutshane kuhlaziyo olusemthethweni lwe-LG kwi-Android 6.0 Marshmallow, ukufakwa kwe-LG G2 kuphinda kuthethwe ngamarhe kwakhona, okuqwalaselwa ngabaninzi njengelinye lezona zixhobo zibalaseleyo ze-Android eziye zenziwa kwimbali yayo.
Ukuhlaziywa ngokusemthethweni kwe-Motorola kwi-Android 6.0 Marshmallow
Ezi ziziphelo ezinokubakho ezifakwe kuluhlu lohlaziyo olusemthethweni lweMotorola kwi-Android 6.0 Marshmallow
Uhlaziyo olusemthethweni lukaSony kwi-Android 6.0 Marshmallow
Aba ngabo bakhethelwe uzuko kuluhlu lukaSony lohlaziyo olusemthethweni kwi-Android 6.0 Marshmallow.
Uhlaziyo olusemthethweni lwe-Samsung kwi-Android 6.0 Marshmallow. I-Samsung Galaxy S5 ishiywe ngaphandle
Olu luHlaziyo olusemthethweni lweSamsung kwi-Android 6.0 Marshmallow, uluhlu lwezixhobo ezithi inkampani yaseKorea icwangcise ukuzihlaziya kwi-Android 6.0 Marshmallow
I-ASUS ityikitya isivumelwano noMicrosoft sokulayisha kwangaphambili iiapps zakhe zeOfisi kwiifowuni zakhe ze-Android kunye neetafile
I-ASUS ityikitye isivumelwano neMicrosoft yokulayisha ii -apps zayo zeOfisi kwiifowuni kunye neetafile ezizayo ze-Android.
IAmazon ithathe isigqibo sokuyeka ukuthengisa iGoogle Chromecast kunye neApple TV
IAmazon yenze isigqibo sokuyeka ukuthengisa iGoogle Chromecast kunye neApple TV. Ufuna kuphela izixhobo ezisebenza neVidiyo yakho yeNkulumbuso.
I-Stagefright, umngcipheko we-Android oyingozi, ukubetha kwakhona
Ukusuka eZimperium bafumene i-malware entsha ye-Android ethatha ithuba kwilayibrari ye-Android yemultimedia ngokujonga kuqala iifayile zeaudiyo
UGoogle uza ngaphambili ukuphendula uthotho lwemibuzo malunga neNexus yayo entsha
UGoogle uya eReddit ukuze aphendule imibuzo malunga nokuba kutheni ukhetho lwezixhobo zeNexus zimbini
UGoogle noMicrosoft basayina uxolo kwimfazwe yabo yelungelo elilodwa lomenzi
UGoogle noMicrosoft baxhawulana izandla ukusayina isivumelwano sokuphelisa amalungelo awodwa abenzi bamachiza abekhona kwiminyaka embalwa ngoku.
I-LG ibhengeza i-V10, i-smartphone entsha enescreen esenzelwe ngokukodwa umxholo wemultimedia
I-LG V10 inescreen sesibini esisetyenziselwa ukuba nayo ngalo lonke ixesha kwaye ke ufumana izaziso, imiyalezo nokunye.
I-5G icwangciselwe ukuba ifike eYurophu ngo-2020
I-Europe ityale i-800 yezigidi kuphando kunye nophuhliso lwe-5G, eya kuthi ifike ukusuka kwi-2020.
IAmazon ivula ivenkile yayo ekwi-Intanethi eSpain
IAmazon yindawo enkulu yokugcina izinto kwi-Intanethi apho sinokufumana khona yonke into. Ngoku, iAmazon ivula iingcango zevenkile yayo eSpain.
U-Tag Heuer uza kuphehlelela i-Android Wear smartwatch ngoNovemba 9 ngexabiso le- $ 1800
U-TAG Heuer Carrera 01 uya kuba yimodeli efika nge-9 kaNovemba ngexabiso le- $ 1.800 kwaye eya kuba ne-Android Wear njengesoftware.
I-giants ezintathu zijongane ubuso ngobuso: i-Nexus 6P vs Galaxy Qaphela 5 vs Xperia Z5 iPrimiyamu
I-Nexus 6P, i-Galaxy Note 5 kunye ne-Xperia Z5 ziye zajongana ubuso ngobuso xa kuthelekiswa neefowuni ezintathu ezinento efanayo: ubungakanani bazo.
La ngamaxabiso eNetherlands eSpain
Ukusukela nge-20 ka-Okthobha ezayo siza kuba nakho ukonwabela iNetflix, la ngamaxabiso eNetflix eSpain
Ukulunga kunye nezibonelelo ze-Android 6.0 Marshmallow
I-Android 6.0 Marshmallow inee-axes ezintathu njengezona zinto zisisiseko: uGoogle kwiTephu, ulawulo olukhulu kunye nokusebenza okuphuculweyo kwebhetri.
Ivenkile yakwaGoogle sele ineChromecast 2 kunye neChromecast Audio efumanekayo nge- € 39
Ngoku iyafumaneka nge- € 39 kwiVenkile kaGoogle zombini iChromecast 2 kunye neChromecast Audio. Izixhobo ezimbini zomxholo weaudio kunye nemultimedia.
IHuawei Nexus 6P ngoku isemthethweni: 5,7 ″ isikrini, umzimba wentsimbi kunye neenguqulelo ezingama-32/64 / 128GB ngexabiso lokuqala le- $ 499
I-Nexus 6P sisiphelo esiphakamileyo sikaGoogle kulo nyaka ngekhamera eya kuthatha iifoto ezikumgangatho ophezulu kunye neenguqulelo ezintathu kugcino: 32,64 kunye ne-128GB
Landela intetho kaGoogle bukhoma ukusuka kumqolo 0 (Ukusasaza) kwaye wazi zonke iindaba ezivela kuGoogle
Apha sikushiya usasazo lwentetho kaGoogle ukuze uyonwabele bukhoma naphi na apho ufuna khona.
Yonke into iThebhulethi yeTeclast X10 HD 3G isinika, iDualBoot iphelele ngaphezulu kwe-200 euro
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo olupheleleyo kunye nohlalutyo lweTeclast X10 HD 3G yeCwecwe ngeDualBoot yeWindows 8.1 kunye ne-Android 4.4.4 boot system ukonwabela okona kulungileyo kuwo omabini amazwe.
Ukuphononongwa kunye nohlalutyo lweLeagoo Elite 1, isiphelo esikhulu ngexabiso elihlekayo
Namhlanje sikuzisa uphononongo kunye nohlalutyo olupheleleyo lweLeagoo Elite 1, isiphelo sendlela esinee-160 zeerandi nje esinika iinkcukacha zobuchwephesha be-Android ephezulu.
U-Elephone Vowney, sesona sixhobo sinamandla somenzi waseTshayina
I-Elephone ngomnye wabavelisi baseTshayina etsala ingqalelo. Ngoku ibonisa i-terminal ye-Elephone Vowney, eyona nto inamandla kuyo.
Imifanekiso emininzi kunye nezinye iinkcukacha ezichaziweyo zeNexus 5X eza kuza ngexabiso le- $ 379
I-379 yeedola lixabiso apho i-Nexus 5X iza kufika khona, i-terminal ene-2 ​​GB ye-RAM kwaye ngeli xesha ayizukufumana indawo encinci ye-microSD.
I-Google Pixel C iya kuba yithebhulethi ye-Android ene-10,2 ″, ikhibhodi enokutsalwa kunye ne-Android Marshmallow
I-Google Pixel C iyakuthatha indawo yeChannelbook Pixel kwaye iza nescreen se-10,2 ", chip ye-NVIDIA X1 kunye ne-3GB ye-RAM
Yenza i-Samsung Galaxy yakho ibe kunye nemixholo emitsha engama-57
Yenza i-Samsung yakho ibe yeyakho kunye nale mixholo mitsha ingama-57 yongezwe yi-Samsung kwivenkile yayo.
IBlackBerry Priv, isixhobo sokuqala seBlackBerry nge-Android
IBlackberry Priv, iBlackberry yokuqala ene-Android kwimarike, ekugqibeleni ibonisiwe. Ngaba iBlackBerry iya kuphumelela ngale fowuni intsha ye-Android?
Ngaba ndiya kuba nakho ukuhlaziya iselfowuni yam ukuya kwi-Android 6.0 Marshmallow?
I-Android 6.0 Marshmallow iza kufika ngomso kwi-Nexus entsha, kodwa uya kuba nayo nayo kwiselfowuni yakho?
UGoogle ufake isantya esiphezulu kwi-WiFi kwizikhululo zikaloliwe ezingama-400 e-India
Esinye sezicwangciso "zokoyisa" i-India kukubonelela nge-WiFi yasimahla eya kuthi ibonelele ngonxibelelwano kubantu abangaphezulu kwezigidi ezili-10 ngosuku.
Ukuvuza okutsha kweHuawei 6P kuqinisekisa ezinye zeenkcukacha zayo: 3.450 mAh ibhetri kunye nomzimba wentsimbi
Ngomthamo owaziwayo webhetri yeHuawei 6P, ukuzimela okukhulu kulindeleke ukuba kukwazi ukufikelela kumhla okanye nangaphezulu ngaphandle kokuhlawulisa.
Mi Imfono, iXiaomi iveza eyayo i-OMV
UXiaomi ubonise eyakhe i-OMV okanye into efanayo, umqhubi weselfowuni oqinisekileyo kwaye wayithiya igama, iMi Mobile.
IBluboo XFire, i-smartphone ene-64-bit chip, i-Android Lollipop 5.1 kunye ne-4G ye-55 euro
IBluboo XFire sisiphelo sendlela saseTshayina esiza neenkcaza esinokuthi singakholeleki ngexabiso elinalo, akukho nto ingaphezulu kwama-55 euros.
UGoogle uthi ukuKhangelwa kwelizwi ngoku kuyakhawuleza kwaye kuchanekile ngakumbi
Injini entsha ngoyena nobangela ukuba ukubonwa kwelizwi kukhangelo kusebenza ngokuchanekileyo nangokukhawuleza.
UMeizu wathengisa ngaphezulu kwe-2,89 yezigidi zeetheminali ngo-Agasti
Siliqhelile ukubona igama elithi Xiaomi xa kuya kubakho ukuthengiswa kwetheminali eTshayina. Kodwa,…
I-Facebook ngoku inika inkxaso kwiividiyo ezingama-360-degree ezivela kwi-Android kunye nohlobo lwewebhu
Ukuqala namhlanje, uya kuba nakho ukubukela iividiyo ezingama-360-degree kwi-Facebook kwifowuni yakho ye-Android okanye kwinguqulelo yewebhu.
I-Google Store wallpapers ukubhiyozela iminyaka esi-7 ye-Android
Ivenkile kaGoogle yabelana ngothotho lweemifanekiso zamaphephadonga ukubhiyozela iminyaka esi-7 ye-Android kwaye ke inani leenguqulelo ebesinokufikelela kuzo
Okunye ukuvuza kubonisa imibala eyahlukileyo ye-LG Nexus 5X
I-LG Nexus 5X izakufika kwiCarbon Black, Ice Blue kunye neQuartz White kwiintsuku ezintlanu xa isungula kwihlabathi liphela.
Iimpawu zeNexus 5X ziyavela kwiAmazon India
Ukucaciswa kweNexus 5X ezayo kuvela ngokukhawuleza kwiAmazon India.
I-Instagram igqitha isiganeko esibalulekileyo sabasebenzisi abayi-400 yezigidi
Inethiwekhi yemifanekiso yezentlalo i-Instagram iyakwazi ukudlula kubasebenzisi abazizigidi ezingama-400 kwihlabathi liphela ngemifanekiso ezizigidi ezingama-80 ekwabelwana ngayo ngosuku
Isiqalisi sokuSebenza sihlaziywa nge-Quickfind njengenqaku elitsha
UChris Lacy uyaqhubeka nokubonakalisa ubunjani bakhe njengonjiniyela weapps kunye nohlobo olutsha lwe-Action Launcher ezisa i-Quickfind naye.
I-Huawei Nexus 6P kunye noyilo lwebhokisi efana naleyo yeNexus 5X iyavela
Namhlanje siyayazi uyilo lweHuawei Nexus 6P kunye neebhokisi eziza kuhlala kuyo kunye neNexus 5X eya kuthi ivezwe nge-29 kaSeptemba.
I-Safedownloadapps, intengiso ecaphukisayo ehlasela ii-smartphones zethu kunye neepilisi
I-Safedownloadapps yi-malware enamandla okanye intsholongwane eye yangena kuGoogle ngeAdsense, isixhobo sayo sokufaka intengiso kumaphepha e-web.
Iitshaneli, ubuchule obutsha beTelegram ukusasaza imiyalezo kumawakawaka abasebenzisi ngaxeshanye
I-Telegram idibanise namhlanje njengento entsha kwiChannel, isixhobo esitsha sokuhambisa imiyalezo kubaphulaphuli abaninzi.
I-LG malunga nobunzima ukuvelisa izibonisi zayo eziguqukayo
I-LG ingaqala ngokusungula izixhobo zokuqala ngemiboniso eguqukayo ngo-2017 emva kokufumana indlela yokuzenza ngobuninzi
Isamsung i-Samsung S7 iphinda ibonwe nge-Snapdragon 820 kunye nesakhiwo se-magnesium unibody?
Amarhe amatsha acebisa ukuba i-Samsung Galaxy S7 entsha iza kudibanisa iprosesa yeQualcomm Snapdragon 820, ukongeza kumzimba we-magnesium unibody
Iifoto zesikrini ziya kuba yi-WhatsApp entsha
Iifoto zesikrini ziya kuba yenye yezinto ezintsha zeWhatsApp kwinguqulelo elandelayo yokwenza izinto zibe lula kumsebenzisi.
I-Oneplus X, i-Oneplus 2 mini eya kuthi ifike ngo-Okthobha kwaye iya kuxabisa malunga ne-220 Euro
Imifanekiso yokuqala ihluziwe enokuba yeyiphi i-Oneplus 2 Mini enokuthi ifike ngexabiso elimalunga nee-euro ezingama-220.
[APK] Imidlalo yokudlala ilungiselela ukongeza ukurekhodwa kwesikrini kunye nokusasaza kuMdlalo weYouTube
Imidlalo yokudlala yeMidlalo kaGoogle ibonakala ingoyena mntu ophethe ukusasazwa kwemidlalo ukuze ikwazi ukubukela kamva kwiMidlalo ye-YouTube.
Udidi lwe-LG lubhengeze nge-7,4 yeemilimitha kunye nekhamera yangaphambili ye-8MP
Ikhamera yangaphambili yeklasi entsha ye-LG iyafana ne-LG G4, ke le yi-smartphone ekhethekileyo yeefoto ze-selfies.
UGoogle uqinisekisa umsitho kaSeptemba 29
UGoogle umema abeendaba ngomnyhadala wawo ngoSeptemba 29. Ngolo suku uGoogle uza kuzisa izixhobo ezitsha ze-Nexus, i-Android entsha, njl.
Khuphela ii-Wallpaper ze-Androidsis simahla ukuzibonisa kwi-Android yakho
Namhlanje sikushiya amaphephadonga ambalwa kunye ne-Androidsis motifs, oko kukuthi, ii-Wallpapers ze-Androidsis.
Isiqendu sokuqala seMinecraft: Imowudi yeBali iza kufika ngo-Okthobha u-15
I-Minecraft: Imowudi yeBali iya kukhutshwa ngo-Okthobha u-15 kwiVenkile yokuDlala njenge-adventure yeTellTale yomzobo apho kuya kufuneka wenze izigqibo
Impilo yeSamsung yeSamsung ngoku iyafumaneka kuso nasiphi na isixhobo se-Android
Impilo ye-S, usetyenziso lweSamsung lomsebenzi womzimba, ngoku iyafumaneka kuzo zonke izixhobo ze-Android ukusukela namhlanje.
Isizukulwana sesibini seChromecast siza kufika siphucule i-Wi-Fi kunye nemowudi yokudlala ekhawulezayo
IChromecast iza kuba malunga ne-Wi-Fi ephuculweyo, indlela yokudlala ekhawulezayo kunye nokuba iya kuba yintoni uyilo olutsha.
Uphengululo lweHenseense King Kong G610
Namhlanje sikulethela uphononongo kunye nohlalutyo lwe-Hisense King Kong G610, itheminali entsha ye-android esungulwe kule nyanga inye kaJulayi 2015 kwaye ngoku sinokuthenga kwiFowuni House.
Kungekudala uya kuba nakho ukusasaza imidlalo yakho yevidiyo ye-Android kwiYouTube
I-YouTube kungekudala iza kubonelela ngamathuba okusasaza imidlalo ngexesha lokwenyani kwinkonzo yayo yee-smartphones ze-Android kunye neepilisi
Uhlelo lokusebenza lweMicrosoft lokuthumela imiyalezo, okanye yintoni i-WhatsApp ye-imeyile, esele ikwi-Android
I-app yokuthumela kukubheja okutsha kweMicrosoft kwi-Android ukunika ithuba lokuthumela ii-imeyile phakathi kwabasebenzisi.
Insiza yokuqala ye-Android ka-Apple ilapha
Into ephantse yimbali esinokuthi siyibone iApple yeApple kwiVenkile yokuDlala namhlanje. Insiza eya kukunceda uhambe ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iOS
I-Snapchat iya kwi-freemium
I-Snapchat yinkqubo yokuseta kwaye ngoku ifuna ukuba nomthombo omtsha wengeniso ngokufudukela kwimodeli ye-freemium.
Kubiza malini ukwenza ii-Apple 6s ze-Apple?
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kubiza malini ukwenza ii-Apple 6s ezintsha? Ewe, qhubeka ufunda le post apho uza kufumanisa indleko zokwenza imveliso.
Ukubaleka kweSpotify ngoku kuyafumaneka kwi-Android, lungisa iingoma zakho ozithandayo kwisingqisho samanqanaba akho
Ngokubaleka kweSpotify, inqanaba lokuhamba kwakho liya kunyanzelisa xa kudlala ingoma entsha kwaye ikunike yonke inkuthazo oyifunayo yokwandisa isantya sakho.
UMark Zuckerberg Ubhengeza uFacebook "Ukungathandi" Iqhosha elongeziweyo
Kungekudala siza kubona kwizixhobo zethu eziphathwayo nakwikhompyuter yedesktop ukuba sikwazi ukunika "ukungathandi" iqhosha kuFacebook.
I-Lenovo Vibe S1, ifowuni eyilelwe abathandi bee-selfies
Sivavanye iLenovo Vibe S1, ifowuni entsha kaLenovo enekhamera engaphambili kabini ukuthatha ezona ziselfies
I-Lenovo Phab Plus, i-phablet enescreen se-6.8-intshi
Sihlalutya kwividiyo i-Lenovo Phab Plus, i-phablet entsha kaLenovo eme ngaphandle kwescreen sayo esimangalisayo se-6.8-intshi
USiswoo i8 Phanter, sivavanye ifowuni entsha yeSiswoo
Sihlalutya kwividiyo iSiswoo i8 Panther, ifowuni entsha kaSiswoo emele umgangatho wokugqitywa kwayo kunye nexabiso layo elilingayo: i-199 euros
I-R9 Darkmoon, yile fowuni intsha yeSiswoo enescreen esikabini
Sihlalutya ngokweenkcukacha zonke iimfihlo zeSiswoo R9 Darkmoon, ifowuni yesibini eneflethi enekhuphiswano neYotaPhone 2.
Isamsung Gear S2, yeyona smartwatch ibalaseleyo kwintengiso?
Iimpawu zokuqala kwividiyo emva kokuvavanya i-Samsung Gear S2, iswatchwatch ebalaseleyo kuyilo lwayo kunye nenyani yokusebenzisa iTizen.
I-Wiko Rainbow JAM, ii-intshi ezintlanu ngesisombululo se-HD esingaphantsi kwe- € 5
I-Wiko ivakalise i-terminal yayo entsha, ebizwa ngokuba yi-Wiko Rainbow JAM. Isixhobo esine-intshi ezintlanu esinesisombululo se-HD esingaphantsi kwe- € 5.
I-Acer Deca-Core yeProsesa yeGamer yeXabiso le-Smartphone kunye neNkcazo
Sichaza zonke iindaba malunga ne-smartphone eyilelwe kuphela abadlali. I-Acer Predator 6 ithembisa ukuba ngaphezulu kakhulu kune-smartphone.
Ngoku ungakhetha iifayile ezininzi ngaxeshanye ukuqhuba iintshukumo kwibhetshi kwiDropbox
I-Dropbox ihlaziyiwe ngokwazi ukwenza isenzo se-batch okanye ukukopa ngokupheleleyo iifolda kwenye indawo yokugcina
Umzimba oMlilo, ukhetho luka Motorola lokulawula imeko yomzimba wakho
Umzimba weMoto ngoku uyafumaneka kuzo zonke izixhobo ezine-Android 4.3 okanye ngaphezulu kwaye uyabolekisa ekubekeni iliso kwimisebenzi yakho yomzimba
I-HTC One A9 iya kuba yeyokuqala i-non-Nexus smartphone ene-Android 6.0 Marshmallow
Usuku olukhethelwe ukubhengezwa kwe-HTC One A9 eza kufika nge-Android 6.0 Marshmallow iya kuba ngoSeptemba 29 xa kuziswa i-Nexus.
I-Qualcomm ibhengeza i-Snapdragon 820, 617, 430 kunye neChips 3.0 ezikhawulezayo
Ngaphandle kokubonakaliswa kwezi tshiphusi zintathu, kukhawuleze ukutshaja i-3.0 ikwabhengeziwe, okuphucula ixesha lokutshaja ngama-38%.
I-Sandisk Wireless Connect, i-USB engenazingcingo kwisixhobo sakho se-android
Sihlalutya kwividiyo iSandisk Wireless Connect, i-USB ephathekayo evela eSandisk eya kuvumela ukusasazeka kwezixhobo ezithathu ngexesha elinye.
I-LG G pad II 10.1, ukubonakala kokuqala emva kokuvavanya i-LG tablet entsha
Uhlalutyo olupheleleyo lwevidiyo ye-LG G Pad II 10.1, ithebhulethi entsha ye-LG emele ukugqitywa kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo: iya kubiza imali engaphantsi kwama-euro angama-600
I-ZTE Axon Elite, ukuqala kokuvela kwividiyo
Sihlalutya i-ZTE Axon Elite kwividiyo, ikubonisa zonke iimfihlelo zeflegi entsha ye-ZTE.
IMicrosoft ifumana iiLebhu eziBini, abenzi besixhobo esithandwayo se-Android Echo Lockscreen
I-Echo Lockscreen yinkqubo yokutshixa isikrini eyenziwe yiLab Labs eyinxalenye yeMicrosoft ukusukela namhlanje
Yonke into ekufuneka uyazi malunga neMoto X Dlala entsha
Ukuphononongwa kunye nohlalutyo lomlilo omtsha we-Moto X apho sikubonisa yonke into ekufuneka uyazi malunga nale ndawo intsha ye-Motorola